I-Curamic enobungozi nge-Spout Company - i-XTL
I-Ceramic egqoke nge-spout iqhathaniswa nemikhiqizo efanayo emakethe, inezinzuzo ezingekho emthethweni ngokuhambisana nokusebenza, ikhwalithi, ukubukeka, njll., futhi ithokozela idumela elihle emakethe edlule, futhi ngokuqhubekayo libathuthukise . Ukucaciswa kwe-ceramic ebekiwe nge-spout kungenziwa ngokwezifiso ngokuya ngezidingo zakho.
I-Ceramic enokwembana nge-spout isetshenziselwa ukuncibilikisa umthamo omkhulu wezinsimbi eziyigugu, njengegolide, isiliva, ithusi, ithusi, ithusi nokuningi.
I-Crucible ine-80 troy oz. I-grams umthamo wamagremu yenziwe nge-silica esetshenzisiwe, ingamelana namazinga okushisa aze afike ku-2500 ° F / 1371 ° C.
I-Earctible ingasetshenziswa ngesitha somshini oncibilikayo noma i-torch ukuncibilika. Ikhwalithi ephakeme ebekiwe, eyenziwe ngobumba elihlanganisiwe lebanga eliphakeme le-silica, lenamba impilo yokusetshenziswa kwe-ebekiwe. Ubukhulu obudongeni obunzima kunezinye izinhlobo ezifanayo (1/4 "- 6.4mm).
Lokhu okubaleka kungasetshenziselwa izinsimbi ezincibilikayo ezinhlafunweni ezingenakufakwa kwensimbi kanye nokuthulula insimbi emishini yokusakaza ye-vacuum kusiza i-vacuum assist of vacuum assist.
1. ukuphindaphinda okuphezulu, akukho ukuqhekeka;
2. Ukumelana nokugqwala okuhle;
3. Ukumelana okuhle okushisayo;
4. Akukho okusasele okulengisiwe, okungapheli, uchungechunge lwama-accert lungasebenzisa izikhathi ezi-3-5, yisitsha esikhulu somlilo sokucima umlilo.
L.o.i (ukulahleka kokulahla) 0.21%
Intengo: Imikhiqizo yethu iqhathaniswa kahle nabanye abathengisi.
Imishini: Sinemininingwane ephelele yokukhiqiza nemishini yokuhlola, kufaka phakathi umugqa wokukhiqiza othomathikhi.
Ifilosofi: ngekhwalithi enhle kakhulu, insizakalo ye-firt-class, ibhizinisi elithembekile
Ikhwalithi: Sidlulile ngu-9001: 2005. ejwayelekile, ezinzile, ezithembekile
* Umakhi ochwepheshe kusukela ngo-1997.
* Ukulawulwa kwekhwalithi okuqinile kwinqubo yokukhiqiza nokubekezelelana.
* Amasampula wamahhala atholakalayo
* Ukukhiqizwa okwenziwe ngokwezifiso kususelwa kumdwebo noma ekucacisweni kwakho
* Ukulethwa kwesikhathi kanye nokusekelwa okuthembekile kanye nensizakalo
* Yokusungula etholakalayo ukuthunyelwa okusheshayo
* Sigcina ubumfihlo bayo yonke imidwebo kanye nemininingwane yebhizinisi phakathi kwethu.
Ungakwazi yini ukunikeza amasampula wamahhala?
* Yebo, singanikeza isampula yamahhala uma sinaso esitokweni, kepha imali yokuhambisa izincwadi kufanele iqoqwe.
Ingabe uyamukela ukukhiqizwa ngokwezifiso ngokususelwa sebhithi kwethu?
* Yebo, sinikeza OEM futhi inkonzo ODM. Vele uthumele nathi umdwebo wakho uma unayo. Uma ungenalo umdwebo, nje usitshele umbono wakho, sizokwenza zifezeke Umdwebo ngawe.
Yini isikhathi kwezidingo?
* Ezingu-7 zokusebenza imikhiqizo esezingeni izinsuku ezingu-30 zemikhiqizo ngezifiso.
Liling Xing Tai Long Special bobumba Co., Ltd
ikheli Inkampani: Shentan Industrial Zone, Liling, Hunan, 412200